Steve - Iyo Jumping Dinosaur, mutambo wakasarudzika | IPhone nhau
IPad nhau | | iPad, Noticias
Sezvo vazhinji venyu muchaziva, muGoogle Chrome isu tinowana mhando yekukurumidza uye yakapusa mutambo unouya kana tisina kubatana uye unovhurwa nekutsimbirira iyo nzvimbo kana isu tiri pamberi peiyo yekubatanidza kukanganisa skrini. Uyu mutambo wakashandurwa nenzira inonakidza kwazvo yeIOS, uye ndeyokuti sezvakaita Google Chrome, tichaushandisa munguva idzodzo apo kutanga mutambo kunorema asi isu tinoda kuzvivaraidza isu kwemaminetsi mashoma. Steve - Iyo Jumping Dinosaur ichatibvumidza isu kutamba zvakananga kubva kuNotification Center, usatambise nguva kuzvitanga.
Apple inotanga kuve isinganyanyo kudzvinyirira neayo mutemo wezvekuita muNotification Center, kunyangwe gore rapfuura haina kubvumidza kana nyore karikudhi, ikozvino tinowana kunyange mitambo yekuda kuziva yakadai yave kubudirira muApp IOS Chitoro, kutamba hakuna kumbove kuri nyore uye nekukurumidza. Nemaitiro ari nyore, ndizvo zvese zvaunogona kukumbira. Tinogona chete kudyidzana nedinosaur neimwe nzira, kusvetuka nekutsimbirira pachiratidziri. Nekudaro nekubudirira ivo vaisanganisira mamwe mavara uye mamwe mamiriro anonakidza.
Sangana naSteve, dinosaur anogara ainewe munzvimbo yako yekuzivisa!
Tamba naSteve chero nguva, chero kupi zvako chingosvetuka kubva kumucheto wepamusoro kwescreen kuratidza nzvimbo yekuzivisa uye yako nyowani dino-shamwari ichave iriko yakakumirira.
Bata chidzitiro kusvetuka uye kunzvenga zvipingamupinyi, kuwana mamaki akanaka uye uve akanakisa Steve mupasi!
Iye zvino une mamwe mavara ekutamba nawo, sangana neshamwari dzaSteve uye sarudza chaunofarira… Shamwari nyowani dzinosvika vhiki rega rega!
Mutambo uyu wakasununguka chose, unoenderana nechero vhezheni uye chishandiso chinosanganisira iOS 9 uye zviri nyore kupindirana. Edza, zviri mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Steve - Iyo Jumping Dinosaur, yekuzivisa nzvimbo mutambo
Nhasi makore gumi nematatu apfuura akavhura iTunes Store